Isishwankathelo seNkampani-I-OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd.ise Building 38, Jinguo park mveliso, No. 500 Zhenkang indlela, kwisithili Jinshan, Shanghai, siye sibe ngaphezu kweminyaka eli-15 amava CNC machining yobungcali e Shanghai, ikakhulu CNC yokugaya, CNC ukujika, ukujika, ukuguqa, i-CNC machining, i-4/5 ye-axis ye-CNC machining, Ukugaya umphezulu, ukusika i-Laser, ukugoba i-Sheet yesinyithi ukugoba njalo njalo. Inkampani yethu igubungela indawo ye-1,200 yeemitha zesikwere, inani labasebenzi malunga ne-30, abaphathi bezobuchwephesha be-10, abahloli bekhwalithi aba-5. Izixhobo imveliso Main iiseti ezingaphezu kwama-30.
Iimpawu zeCNC Machine
1. Iimpawu ezibalaseleyo machining CNC
Kubalulekile ukuba uqaphele apha ukuba izixhobo zoomatshini be-CNC zihlala zifumaneka ngesixhobo esiguqukayo esizenzekelayo kwaye silawulwa yinkqubo. Yiyo loo nto kucacile ukuba inkqubo yokusebenza igxile kwindalo. Kubo bonke oomatshini be-CNC, inkqubo yokulinganisa ngombane iyaqeshwa kwi-axis nganye elawulwayo. Iinkqubo zokulinganisa zihlala zisetyenziswa koomatshini be-CXNC bokuchonga ukubekwa kwesilayidi kwisilayidi.
Ezi nkqubo zikwadlala indima ebalulekileyo ekuziqhelaniseni netafile yokuluka kunye nokulinganisa isantya sokujija. Ulawulo lwe-CNC zizinto eziphambili ze-CNC. Ulawulo olutsha lwe-CNC lwenzelwe izicelo ezilula ezinxulumene nokujika kwamaziko kunye nokugaya. Kwelinye icala, ulawulo lwekhompyuter lwenombolo oluphambili luvumela ulawulo oluchanekileyo lwee-axes ezahlukeneyo, lubenza bakwazi ukudibanisa izikhundla ngokukhawuleza. Ke masikhe sithi krwaqu kwezinye zeempawu eziphambili ze-CNC.
2. Iinkqubo zokuthambisa ezizenzekelayo
Kufanelekile ukuba ukhankanye apha ukuba unokufumana ukuthembeka kwexesha elide kwisixhobo somatshini esixhomekeke kulondolozo oluqhelekileyo kunye neshedyuli yokuthambisa. Yinto eqhelekileyo ukuba ukungathanjiswa ngokwaneleyo kwiibheringi kungadala umonakalo kwangaphambi kwexesha kubo. Ngapha koko, ukuthambisa into engonelanga kunokonakalisa iitreyini zomkhondo. Ngamanye amagama, ukuba kukho ukusilela okupheleleyo kwe-lubrication, ukuzinza komatshini kuya kuncipha.
Ngokwesiqhelo, iindleko zokulungisa ezinxulumene noomatshini be-CNC zibiza kakhulu. Ke, kusengqiqweni ukukhetha abo matshini be-CNC baxhotyiswe ngendlela yokuzithambisa. Ikwabizwa ngokuba kukuthambisa okuzenzekelayo, apho isixhobo ngasinye sinxibelelene nobubanzi obuninzi. Isithambisi sokuhambisa ngokuzenzekelayo sibonelela ngokutya okucwangcisiweyo kunye noxinzelelo kwioyile nganye.
3. Ukuguqulwa kwenkqubo yokuchithwa kwe-CNC kungcono
Emva kokulungisa ingxaki kunye nokuqinisekisa inkqubo yokusika uvavanyo, ukuhanjiswa koomatshini be-CNC kungasetyenziselwa ukugcina ixesha elibalulekileyo kunye nokuqinisekisa umgangatho ngaxeshanye. Ngapha koko, le nkqubo inokusetyenziswa njengetemplate yoqwalaselo olulandelayo lwamanye amalungu afanayo. Ke, ngenxa yeempawu eziguqukayo zoomatshini be-CNC, ukuhamba komsebenzi ngeendlela ezahlukeneyo kulo lonke ishishini kunokuhlengahlengiswa.
4. iinketho othini CNC machining
Zombini i-axis ezi-3 kunye ne-5-axis ye-CNC yoomatshini banoluhlu olwandisiweyo lokukhetha xa umxholo umalunga ne-spindles. I-HSD kunye ne-Perske spindle sele ibetha kakhulu kummandla we-CNC machining. Zisebenza kakuhle kwaye zinokuthatha imithwalo ngokuqinisekisa ngobunono bakho ngexesha elinye. Ngaphezu koko, iimpompo ezincamathelayo ziluphawu olukhethiweyo koomatshini be-CNC. Iimpompo ezincamathelayo zinika amandla kunye nozinzo kuseto lomatshini we-CNC.
5.Izixhobo eziseta ubude besixhobo
Izixhobo zokusetha ubude bezixhobo zinokwenza i-3-axis kunye ne-5-axis CNC oomatshini basebenze ngakumbi. Iinkqubo zokulinganisa ubude zichanekile kakhulu. Ngapha koko, baquka iM-Code enye eyenza ukukhethwa kwesixhobo kwindawo ezenzekelayo. Ngapha koko, ukubekwa kwesixhobo kwindawo yokulinganisa iprosesa kunokulungiswa ngoncedo lwezixhobo zokusetha ubude bezixhobo. Xa uviwo lufumene umatshini, ubude bezixhobo ezilinganisiweyo buya kugcinwa ngokuzenzekelayo kwitafile yesixhobo seFagor.
6. Ulawulo lweeFagor
Ulawulo lwefagor lukwalicandelo elidibeneyo le-3-axis kunye ne-5-axis CNC oomatshini. Nangona uninzi loomatshini be-CNC beza kuxhotyiswa ngokusebenza, abanye abavelisi abayifaki ngaphambili koomatshini be-CNC. Kwimeko apho umatshini wakho we-CNC ungenazo iiFagor Controls, kungangcono ukuwathenga kuye nakowuphi na umthengisi weqela lesithathu.
7. Kubalulekile ukuqhuba iimvavanyo zangaphambili ngaphambi kokuqala kwenkqubo yokuvelisa
Ukuchaneka, imeko-bume yexesha lokubaleka kwe-CNC machining izenzekele kakhulu. Esi sizathu sokuba umntu kufuneka anike ingqalelo efanelekileyo kukhuseleko kunye nomgangatho. Ngamanye amazwi, iinkqubo machining ezinxulumene CNC kufuneka ukuhlangabezana nazo zonke iindlela zokusebenza kunye nemveliso kuvavanyo kwetyala. Uvavanyo lwezilingo ngaphambi kokuqala kwenkqubo yokuvelisa lunokukusindisa kwii-hassles ezininzi.
1.I-Ouzhan ineeseti ezingaphezu kwe-30 zoomatshini be-CNC abaphambili, uninzi lwazo oluthathwe eSwitzerland naseJapan, ukuchaneka kwethu kungafikelela kwi-0.01mm.
2. I-Ouzhan kungoku inabasebenzi abangaphezu kwama-30 kwaye ngaphezulu kwe-10% bakwiMasters okanye izidanga zobugqirha. Iinjineli zethu ezilishumi zonke zithweswe izidanga kwiiyunivesithi eziphambili zaseTshayina eziphambili koomatshini kwaye zinolwazi oluchanekileyo lolwazi.Abasebenzi bethu bezorhwebo bamanye amazwe ngabafundi abaphumeleleyo kwezorhwebo, abanobuchule kwinkqubo yorhwebo lwangaphandle.Amasebe amabini enkampani yethu anokuncedana aze akuzisele eyona nkonzo intle. .
3.I-Ouzhan inefektri yayo ye-CNC, kuba ifektri yethu yasekwa eShanghai ngo-2005, sisebenzise amashumi eminyaka yamava ethu atyebileyo kunye nolwazi kwicandelo lokuchola i-CNC ukuphumelela ukwamkelwa kwabathengi abaninzi. NjengeTrutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco njalo njalo.